Ogaden News Agency (ONA) – Genocide Watch oo sheegtay in Xasuuqa Ogadeniya marayo marxlada 7aad ee xasuuqa (Stage 7 of 8 Stages of genicide)
Genocide Watch oo sheegtay in Xasuuqa Ogadeniya marayo marxlada 7aad ee xasuuqa (Stage 7 of 8 Stages of genicide)
Posted by ONA Admin	/ June 11, 2013
Haayada xuquuql insaanka Genocide Watch oo ah urur ku taqasusay ka hortaga xasuuqa afka qalaad lagu yidhaado Genocide ayaa shaacisay in Xasuuqa ka socda Ogadeniya uu marayo marxalada 7aad ee Xasuuqa. Marxaladaas oo ah heerka ugusareeya oo ah waqtiga xasuuq ba’ani dhaco ee ka hortag jirin balse lagu dadaalo sidii loo badbaadin lahaa dad badan. Waxaa marxaladan ka sareysa marxalada 8aad ee xasuuqa oo ah waqtiga la iska indha saabo xasuuqa ka socda goob. Hadaba Wakaalada wararka Ogadeniya ayaa muraajaco ku sameysay marxaladaha Xasuuqa ee loo yaqaano 8 Marxaladood ee xasuuqa.
8 Marxaladood ee Xasuuqu maxay yihiin?
Haayada Xuquuql Insaanka ee Genocide Watch ayaa so saartay marxalado caam ah oo goob kasta oo xasuuq ka dhacayo lagu arko waxayna u qeybiyeen 8 marxaladood oo midba midka kale loogusii gudbo. Marxaldahan waxay leeyhiin cadeymo iyo calaamado lagu kala garto sidoo kale waxay leeyihiin nidaamyo looga hortagi karo oo loo qondeyay. Marxaladahan 8 ah halmar waalawada arki kara balse waa kala xoog badanyihiin
Kalasooc: Waa markii dadka lakala sooco ee loo kala sooco Diinta ay kala aaminsanyihiin, Dhaqanka, Wadanka, oo dadka loo kala qeybiyo “Idinka iyo Anaga”
Dhulka Ogadeniya arintaas muddo dheer ayay kasoo jirtay in Somalida Ogadeniya laga sooco Qowmiyadaha kale ee Ethiopia. Illa hadana kala soocaas wuu jira oo dowladihi hore iyo gumeysigan Woyanuhu intuba waa ka sooceen shacabka Ogadeniya Itoobiyada kale.
Shaanbadeyn: marxalada kowaad dadkii lagu kala soocay ayaa loo sameyn magacyo lagu shaanbadeeyo oo lagu kala garto. Tusaale ahaan shacabka Somalida Ogadeniya talisyadii hore gumeysiga Ethiopia iyo taliskan eega joogaba waxay ku shaanbadeeyeen shacabka Somalida Ogadeniya:
Dad xoolo dhaqato ah oo wadanka iyagu iska laheyn oo u yimaada xoolahoda inay daaqsiyaan.
Dad aan Ethiopian aheyn oo looma aqoonsan dadkan inay Ethiopian yihiin xuquuqna lama siinin
Dad Ethiopianimada aan ogoleyn oo Xoriyad raba/ dad raba inay ka goostaan Itoobiya ayaa lagu shanbadeyay
Marxaladan shaanbadeynta ahi xasuuq ma keento hadii aan lagu buun buunin cadaawad kale oo cuqdad la dhex dhigin labada kooxood ee loo kala saaray idinka iyo anaga. Anaga Itoobiyaan ah iyo idinka Itobiyaan ma tihidin, labadaas kooxood hadaan la isku dirin cadaawadna la dhex dhigin xasuuq innuusan dhicin ayaa suurto gal ah
Dadkoo Xoolo ama Xayawaan lagasoo qaado: Marxaladan waa markii kooox laga dhigo inay koox kale ka hooseeyaan. Waa markii koox loo arko inay yihiin xaywaan ama xoolaha la qiimi yihiin.
Dadka somalida Ogadeniya talisyadi hore ee gumeysiga Ethiopia iyo taliskan wayaanuhuba waxuu dadka somalida Ogadeniya ula dhaqmi jiray si ka baxsan bani aadanimada isaga oo idaacadaha iyo TV-yadoodaba ka shaacin jiray ama eegaba ay ka shaaciyaan in dadka somalida ahi yihiin dad cawaan ah. Talisyadi hore waxay ugu yeehdi jireen somalida “Somali Shirdaam” Somalidi cawaanka aheyd iyaga oo ku caaya hidaha iyo dhaqankooda gaar ahaan muunada dharkooda.
Taliskan Woyanahu wuuba kasii daray oo waxa uu somalida Ogadneiya ka dhigay dad xoolaha oo kale ah. Isaga oo inta uu dadkii kala soocay, koox ka dhigay inay xoolaha u galmoodaan.
Waqtigan waa waqtiga dadka TV-yada iyo idaacadaha lasoo istaajiyo oo lagu qasbo inay dadku isku qiraan inay xoolo yihiin. Waa waqtiga dilkooda la baneysto, qofki dila dadkaasna loo arko nin barakaysan oo sharaf leh.
Abaabul: Xasuuq sidiisaba waxaa sabab u ah Abaabul aysoo aggaasimaan talis dowladeed. Intabadan talisku ama dowladu waxay adeegsata maliishiyaad shaqadaas u qabta si aan dowlada loogu eedeyn inay xasuuqaas iyagu sabab u yihiin. Waxaa dhacda meelaha qaarkood in malishiyaadka laftigooda si dahsoon oo maldahan oo la aqoonsan karin loo howlgaliyo. Sida ka dhacda wadamo badan.
Dhulka Ogadeniya gumeysiga Ethiopia waxa uu howlgaliyay malishiyaadka Liyu Poliska si ay u fuliyaan xasuuq islamarkaasna xasuuqa ay ciidamada Regular army-ga Itoobiya xasuuqa ay geystaan loo dhaho waxaa geystay oo sabab u ah Liyu Poliska.
Waxaa caado noqotay markasta oo xasuuq dhaco in afahayeenka raisal wasaaraha Itobiya iyo wasiirkooda saxaafaduba ay dhahaan xasuuqa ka dhacay Ogadeniya waa somali dhexdood weeye iyaga isleynaya si markaas caalamka indhahiisa usii jeediyaan.
Waqtigan waxaa la soo abaabula kooxo, waxaana lo tababara ciidan ahaan, waxaa lasiiya nidaam iyo farsamadii ay ku howlgali lahaayeen kuna fulin lahaayeen xasuuqa.
Sida cad Ciidamada Liyu Poliska waa ciidamo ay dowlada Ethiopia so hubeysay soona tababartay, Waxaana lasiiyay khidadii ay ku fulin lahaayeen xasuuqa iyo gumaadka shacabka Somalida Ogadeniya.
Marxaladan waa waqtiga kooxo xagjir ah ay abuurmaan kuwaas oo raba in si dhaqso ah loo geysto xasuuq cidii ka hor timaada fikirkoodana iyaga ayay ku bilaabaan in marka hore ay dilaan. Kooxdani waxay markiiba idaacadaha kashaaciyaan arrimo xag jir ah oo daggaal lagu qaadayo dad gooni ah.
Tusaale ahaan Kaligi taliyhi Bakhtiyay Males Zenawi, Waxa uu iclaamiyay in daggaal lagu qaadayo ree guuraga Somalida Ogadeniya midaas oo si cad uu uga shaaciyay warbaahinta caalamka. Waqtigaas waxa uu xalaaleystay una baneeyay ciidankiisa Woyanaha inay xasuuq ka geystaan dhulka Ogadeniya.
Males Zenawi waqtigaas waxuu laayay saraakil badan oo tigre ahaa oo kasoo horjeeday in xasuuq laga geysto dhulka Ogadeniya saraakiil badan oo tigre ahna waxa uu siiyay amar lagu badalay ama ruqsad looga qaaday xilka, isaga oo kuwa badana ku eedeyay inay af-ganbi damacsanaayeen.
Diyaar garow: Marxaladan waa marxalada la diyaariyo dadkii la xasuuqi lahaa. Waxaa la baadi gooba dadkii lagu fulin lahaa xasuuqa iyaga oo meelaha ay dagan yihiin, xoolahooda, hantidooda iyo naftooda sumad loo sameeyo lagaga garto ummada kale. Waxaa la diyaariya liistoyin iyo qariirado lagu qeexayo dadkaas la leynayo magacooda iyo deegaankooda intaba.
Sida Ogadeniya ka taagan waxaa jira dhul iyo qariirado ay ciidamada gumeysiga Ethiopia ay sameysteen oo xasuuqa si joogta ah looga geysto. Waxaa la arkay markasta oo xasuuq dhacayo, in ciidanka gumeysiga Ethiopia la yimaadaan magacyo. dadka markii lasoo arruuriyo ee goobo lagu xasuuqo la isugu keeno inay magacyadaas yedhiiyaan dadkaasna ay dilaan xoolahodana ay dhacaan.
Waxaa jira tuuuloyin ay gumeysiga Ethiopia si joogta ah u calaamadeysteen oo xasuuq joogta ah oo maalinle ah ka dhaco deeganaas Ogadeniya.Marxalada shanaad waxay kulansatay marxalado badan oo ka kooban 8 heer uu maro xasuuqu. sidaan soo sheegnay marxaladahan halmar ayaa lawada arki karaa. Dadkii oo lakala soocayo, dadkii oo magacyo iyo sumado loo kala sameynayo, dadkii oo qaarkood xoolo oo kale laga dhigayo dad aan bani aadam ahayn, iyagii oo liisto lagu wato, iyo iyagii oo goobtaas lagu leynayo.
Kataqalusid. Marxaladan waa markii dilka dadku bilowdo oo si rasmi ah xasuuq wadareedyo u dhacaan midaas sharci ahaan dhinaca Qaanuunka waxaa loo yaqaana ” Genocide”.
Waxaa amar lagu bixiyaa in laga taqaluso wax alaale waxii lacalaamadeeyay ee lagu suntay in ay yihiin dadka la baa bi’inayo. Dadka wax leynaya waxaa laga soo dhaadhiciya dadka ay leynayaan inaysan aheyn dad bani aadam ah, waxaa laga soo dhaadhiciya inay yihiin dad daka kale ka hooseya ama dad cadow ah oo xaywaan oo kale ah.
Waqtigan oo kale waxaa dilalkan soo aggaasima dolwada waxayna adeegsadaan malishiyaad geysta fal danbiyeedkaan. Waxaa marar badan Dowladu u adeegsata malishiyaadkan inay ka dhaadhicyaan inay soo aar goostaan, oo malishiyaadka intay qabiilo u qeybiyaan ayay ku dhahaan qabiil hebel weerara waa qabiilkii aanada idinka dhaxeysay, Halkaasna daggaal qabiil ayay ka abuuraan iyo colaado cusub.
Dhulka Somalida Ogadeniya waxaa lagawada dharagsanyahay in ciidamada Gumeysiga Ethiopia ay adeegsadaan Ciidamada hawaarinta ee loo yaqaano Liyu Polis,
Liyu polisku isaga oo fulinaya amaawiirta ciidanka Gumeysiga Ethiopia ayay geestaan xasuuq.
Waxaa markhaati madoon ah in Ciidamada Liyu Poliska inta qabiilo loo qeybiyo in gobolada Ogadeniya la geeyo. Isla markaasna laga dhaadhiciyo gobolkan aad joogtaan waxaa daga qabiil hebel, cadwogina weeye ee laaya. waxaa lawada arkay In xuduudaha Somalia inta loo diro caruur ka tirsan liyu poliska in ay xiisado qabiil ka abuuraan oo dad ku laayaan kadibna dilalkaas loo aaneyo qabiilo kale.
arrimahaas oo dhan marka la isugeeyo waxaa cad in dhulka Ogadeniya uu kasocdo Xasuuq Wadareedka loo yaqaano Genocide midaas oo masuuliyadeedu hada tahay arrin caam ah oo caalamka oo dhan u taala sidiii loo joojin lahaa loona badbaadin lahaa shacabka soo qaxay iyo kuwa ku sugan Ogadeniya intaba.
Dafirid: Marxaladan waa marxalada u danbeysa ee hadiyo jeer timaada markii xasuuq dhaco.Dafiraadan waxay markaahti u noqota in Goobtaas xasuuq ka dhacay.
maxaladan waa markii dadka xasuuqa geysta ay bilaabaan inay inkiraan in xasuuq ay geysteen. Waxay danbiilayaashaasi bilaabaan inay dadkii ay laayeen xabaalahooda qodaan, kadibna ay gubaan lafahooda si aan loo arkin xabaal wadareedka. Waxay isku dayaan inay masaxaan oo qariyaan wax kasta oo cadeyn noqon karta. Waxay hanjabaado iyo digniino siiyaan dadka ay uga cabsi qabaan inay markhaati yihiin. Waxay ka hor yimaadaan dhamaanba codsiyada qaramada midoobay iyo haayadaha xuquuqul insaanka iyo saxaafada rabta inay goobta tagaan baadhitaanana kusoo sameeyaan waxa meesha ka dhacay.
Waxaan ognahay oo markaati madoon ah dhulka Ogadeniya. In gumeysigu hadiyo jeer sheegto in xasuuq ka dhicin. Waxaan wada aragnay inay Dolwada Ethiopia diiday codsigi qaramada midoway ee ahaa in gudi xaqiiqraadis ah loo diro Ogadeniya oo qaramada midobay kasocda.
Waxaan aragnay in Ethiopia iyadu soo saarto warbxino ay ku sheegeen inay iyagu u direen gudi xaqiiq raadis ah oo soo badha xasuqa ogadneiya. Gudigaas oo ahaa gudigi loo diray inay soo qariyaan raadkii dambilayasha, markii ay qarin kari waayena waxa ay Ethiopia go’ansatay in Gudaha Ogadeniya laga mamnuuco dhamaanba haayadaha Qaramada midbowbay ee looga shakiyo inay wadaan baadhitano iyo cadeymo ku aadan xasuuqa Ogadeniya. Waxaa laga mamnuucay wadanka Haayada Bisha Cas Red Cross iyo haayado badan oo samafal ah Ogadeniya,
Waxaa Ogadeniya laga xidhay saxaafada Caalamka iyo Guud ahaanba Adduunka
Sidaas awgeed, Xasuuqa Ogadeniya ka socda waa heerkii 8aad inkaso mar hore ay Haayada Xuquuql insaanka ee Genocide Watch ay sheegtay in ay marayso marxaladi todobaad . Maadamada Wadamada Ree galbeedka iyo Qaramada midboobay kaalintoodi kasoo bixin oo cadaadiski larabay lasaarin Gumeysiga Ethiopia.
Marka la qiimeyo jawaabaha gumeysiga Ethiopia cadaadisku haba yaraade waxaa muuqata inay 8 Marxaladood ee xasuuquba uu ka taagan yahay waqtigan gudaha Ogadeniya.